एमालेले बनायो ९ विभाग, को-कोले पाए जिम्मेवारी? « Nepali Bahas
काठमाडौं– नेकपा एमालेले ९ वटा विभाग गठन गरेको छ ।
आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले २५ सदस्यीय ९ वटा विभाग गठन गरेको हो ।
बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्कुल विभाग, विष्णु पौडेललाई संगठन विभाग, सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संसदीय विभाग, विष्णु रिमाललाई आर्थिक विभाग, प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रचार विभागको जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यस्तै, भानुभक्त ढकालले पर्यटन विभाग, डा. राजन भट्टराईले विदेश विभाग, अग्नि खरेलले निर्वाचन विभाग र देवेन्द्र दाहालले स्थानीय तह विभागको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।